"Tayada lagu bilaabayo, Daacadnimada asaasiga ah, Shirkad Daacad ah iyo faa'iido wadaag" waa fikradeena, oo ah hab lagu dhisi karo si joogto ah loona daba-galo heer sare ee Badeecadaha,,,, Iyadoo leh tiro ballaaran, tayo wanaagsan, qiime macquul ah iyo naqshado casri ah, wax soo saarkayaga waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa warshadahaan iyo warshadaha kale. In macaamiisha loo sameeyo qiime dheeri ah ayaa ah falsafadeena ganacsiga; Macaamiil sii kordhaya ayaa ah cayrsigayaga shaqo ee Wax soo saarka, Ku soo dhawow inaad soo booqato shirkadeena, warshadeena iyo qolkayaga bandhigga halkaas oo lagu soo bandhigo alaabooyin kala duwan oo la kulmi doona rajadaada. Dhanka kale, way ku habboon tahay booqashada degelkeenna, shaqaalaheena iibkuna waxay isku dayi doonaan sida ugu fiican inay ku siiyaan adeegga ugu fiican. Fadlan nala soo xiriir haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah. Ujeedkeenu waa inaan ka caawinno macaamiisha inay xaqiijiyaan hadafyadooda. Waxaan wadnaa dadaal ballaaran si aan u gaarno xaaladdan guul-u-guuleysiga ah.
Gasho Habeenkii Loogu Xidho Man-HDR-M9611
Dhar: Jasiiradda Jasiiradda oo Lagu Dhejiyay
Wuxuu Noqon Karaa Midab Kale
Moq: 2000set (Markaynu Haysano, Waa La Dalban Karaa 200-500set)
Waqtiga Delevery: 50days
Bixinta: t / t, l / c Sight
Gasho Habeenkii Loogu Xidho Man-HDR-9613-9614
Dhar: Jasiiradda Jasiiradda oo leh Kalaab
Guri Habeenkii Loo Xiro Ninka
Dhar: Polyester62% cudbi 35% Spandex3% Fab Dharka tolida）
Lakabka: 100% Polyester
Midabka: Buluug Madoow, Grey
Shayga MAYA .: ABZ-CTM001/002
DHAQAALAHA: POLYESTER62% XADGUDUB 35% SPANDEX3% （QALABKA TABABARKA）
WAA LAGA HELI KARAA midab kale
MOQ: 2000SET (MARKII AAN ISKU DUURNAY, WAAN SAMEYN KARAA 200-500SET)
WAQTIGA WAQTIGA LAGU SOO DIRO: 50DHO
BIXINTA: T / T, L / C OO MUUQAAL AH
MUQDISHO FARSAMADA NINKA 'PADDED VEST'
Jaakadan ayaa loo xirxiray ragga.
Jaakada Herringbon waxay ku duubantahay jaakad furitaan buuxa leh
Jaakada dhogorta leh ee dhogorta leh waxay ku daboolan tahay dabool nin
Tani waa jaakada dhogorta dhogorta leh ee dhogorta leh oo daboolan oo loogu talagalay wiilka.
Jasiiradda Dayrta ee Nin Furashada leh oo Hood leh
Tani waa jaakad jilicsan oo nus furan ah.Waa jaakad firaaqo ah. Waa dabayl la'aan, diirran, jaakad dabool leh. Daboolka ayaa leh laba istaaji iyo roogga.
Waxay leedahay laba jeeb oo dhinaca hoose ah oo leh jiinyeer .Foomaha hore waa jeebka hoostiisa dukka, waa moodada oo umuuqda mid dhalinyaro ah. Naqshadeynta Specail ayaa gadaal ka hooseysa gudaha gudaha iyadoo leh jiinyeer aan la arki karin oo loogu talagalay daabac ama adeegsi kale oo macaamiil kasta ay leedahay. wareejinta qalabka.
Jasiiradda Dayrta ee Furan Nin Furan Oo Hood Leh
Tani waa jaakad jilicsan oo furan oo furan.Waa jaakad xilli firaaqo leh.Waa dabayl la'aan, diirran, jaakad dabool leh. Daboolka ayaa leh laba istaajiya iyo laastik.
Waxay leedahay laba jeeb oo dhinaca hoose ah oo leh jiinyeer .Nakhshadeynta specail ayaa ah tolida laabta oo leh jiinyeer aan la arki karin oo loo yaqaan 'embroider' ama adeegsiga kale ee macaamiil kasta.